Ogaden News Agency (ONA) – Mudaaharaad Balaadhan oo Zimbabwe Ka Dhacay.
Mudaaharaad Balaadhan oo Zimbabwe Ka Dhacay.
Posted by ONA Admin	/ November 19, 2017
Kumanaan taageerayaal ah oo xamaasadeysan ayaa socod ku Maray jidadka magaalada haraare, Caasimadda dalka Zimbabwe halkaa oo dibad bax ay ku dalbanayeen in Madaxweyne Robert Mugabe uu xukunka ka dego. Dibad baxayaasha ayaa watay boodhadh ay ku qoraayeen Mugaabe ha iska tago – si deggan oo aan Afgambi aheyn.
Ciidanka Zimbabwe oo horey u diiday dibad baxayo noocan oo kale ah inay ka dhacaan jidadka Caasimadda Harare ayaa taageeray mudaaharaadkii shalay, iyagoo dadka u tilmaamayay inay isugu tagaan fagaaraha Zimbabwe Grounds ee koonfurta Magaalada Haraare. Fagaarahaa waxaa khudbado ay kaga dalbanayeen Mugaabe inuu xilka wareejiyo ka jeediyay dadka u dhaqdhaqaaqa ururada bulshada, siyaasiyiin iyo dad horey ugu soo dagaalamay xoriyadda Zimbabwe.
Fagaarahan – Zimbabwe Grounds- ayaa ah goob taariikhi ah, waana halkii dadka reer Zimbabwe ay ku soo dhaweeyeen Mugabe, markii uu ka soo noqonayay dibad joogga sanadkii 1980-kii, ka dib dagaalkii xoreynta ee ay Zimbabwe kaga hoos baxday xukunkii dadkii dadka Cadaanka ah ee laga tirada badnaa. Dibad baxayada ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyin kale oo Zimbawe ku yaala.
Mugabe, oo 93 sano jir ah dalkaasina soo kuxumayay 37 sanadood ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhega adeeygayo dalab uga yimid ciidamada, Xubno ka tirsan xisbigiisa ZANU-P, iyo siyaasiyiin, kuwaas oo dhamaan ka dalbaday inuu xukunka ka dego.